Posted by pandora at 12:33 AM
အတုံ့အလှည့်ပေါ့ အမရယ် ဒါပေမယ့်အဲလက်စ်အတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူး ။။
စာရေးဆရာမ မက်တဲ့အိပ်မက်က ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ. အဲလက်စ်ကို အဲလိုဇာတ်သိမ်းသွားတာသိရင် သားကငိုမယ်ထင်ရဲ့. အဲလက်စ်နဲ့ ကျား. အတွေးတွေဗျာများသွားတာတော့အမှန်ပဲပန်ရယ်
ဟိုခြင်္သေ့ကြီးရှေ့ကို ဟိုကျားသစ်ကြီးကျပြီး ဟို ကျားသစ်ကြီးရှေ့ကို ဟို ... လူက ဘယ်တော့ ကျလာမှာလဲလို့ တွေးရင်း ...